Circumstances 2: The Chase (2019) | MM Movie Store
ဒီကားလေးကတော့ 2018 မှာ ထှကျရှိခဲ့တဲ့ Circumstances ရဲ့ အဆကျပဲဖွဈပါတယျအညှနျးကီရှောငျနဲ့တီအတေို့ သူငယျခငျြးနှဈယောကျဟာ တရားမဝငျတဲ့ အလုပျတှနေဲ့ ဝငျငှရှောနတေဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ.ဒါကွောငျ့သူတို့မှာ ပွိုငျဖကျဂိုဏျးတှလေညျးရှိတဲ့အပွငျ FBI ရဲ့အခြိနျပွညျ့စောငျ့ကွညျ့ခွငျးကိုလညျး ခံနရေပါတယျ.
FBI အနနေဲ့ ကီရှောငျတို့ကို လြှို့ဝှကျစှာစုံစမျးဖို့အတှကျ သူတို့ရဲ့အေးဂငျြ့ ခနျြကို တာဝနျပေးခဲ့ပါတယျ.ဒါပမေဲ့ ခနျြဟာ ကီရှောငျကိုခဈြမိပွီး ကီရှောငျရဲ့ကလေးကိုပါလှယျထားရတဲ့အခါ
တဈဖကျမှာလညျး ပွိုငျဖကျဂိုဏျးရဲ့လုပျကွံမှုကွောငျ့ ကီရှောငျရဲ့သူငယျခငျြးတဈယောကျ သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ.ဒါကွောငျ့ ကီရှောငျနဲ့တီအတေို့နှဈယောကျ သူတို့သူငယျခငျြးကိုသတျသှားတဲ့သူတှကေို ဘယျလိုလကျစားခသြှေားမလဲ?ခနျြကရော ကီရှောငျကို FBI လကျထဲကနေ လှတျအောငျဘယျလိုတှေ ကာကှယျပေးမလဲ ဆိုတာ စိတျဝငျစားဖှယျ ကွညျ့ရှုရမှာပါ~
ဒီကားလေးကတော့ 2018 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Circumstances ရဲ့ အဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အညွှန်းကီရှောင်နဲ့တီအေတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာ တရားမဝင်တဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ ဝင်ငွေရှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်.ဒါကြောင့်သူတို့မှာ ပြိုင်ဖက်ဂိုဏ်းတွေလည်းရှိတဲ့အပြင် FBI ရဲ့အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုလည်း ခံနေရပါတယ်.
FBI အနေနဲ့ ကီရှောင်တို့ကို လျှို့ဝှက်စွာစုံစမ်းဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့အေးဂျင့် ချန်ကို တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်.ဒါပေမဲ့ ချန်ဟာ ကီရှောင်ကိုချစ်မိပြီး ကီရှောင်ရဲ့ကလေးကိုပါလွယ်ထားရတဲ့အခါ
တစ်ဖက်မှာလည်း ပြိုင်ဖက်ဂိုဏ်းရဲ့လုပ်ကြံမှုကြောင့် ကီရှောင်ရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်.ဒါကြောင့် ကီရှောင်နဲ့တီအေတို့နှစ်ယောက် သူတို့သူငယ်ချင်းကိုသတ်သွားတဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုလက်စားချေသွားမလဲ?ချန်ကရော ကီရှောင်ကို FBI လက်ထဲကနေ လွတ်အောင်ဘယ်လိုတွေ ကာကွယ်ပေးမလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာပါ~
The Penthouse 3: The Beginning of the End – Link 2
The Magicians – Season 1 (Episode 3)